Banyere Vape na United States na Gburugburu Awa
Mbipụta ndị nchụ nta akụkọ Site na Mmetụta Admin 20-11-19 Hapụ ikwu
Omume ndị mmadụ na-enwe banyere vap na iji nicotine eme ihe n'ozuzu dịgasị iche iche. Na United Kingdom, ụlọ ọrụ ahụike gọọmentị na-agba ume iku ume. Ebe ọ bụ na ise siga na-eme ka UK National Health Service na-eweta ibu dị oke ọnụ, mba ahụ na-echekwa ego ma ọ bụrụ na ndị na-ese anwụrụ ọkụ na-a toụ sịga. Imirikiti mba ndị ọzọ niile ...
Tụ Isi na United States na Gburugburu Worldwa
Mbipụta ndị nchụ nta akụkọ Site na Mmetụta Admin 20-10-15 Hapụ ikwu
Ka vaping na-eto eto na ewu ewu, ọ na-abụ ebumnuche ebumpụta ụwa maka gọọmentị nwere mkpa ụtụ isi. Ebe ọ bụ na ndị na-ese anwụrụ na ndị na-a smoụbu sịga na-azụkarị ngwaahịa alụlụ, ndị isi ụtụ isi na-eche n'ụzọ ziri ezi na ego ejiri anwụrụ sịga bụ ego anaghị etinye aka na akwụkwọ ụtaba ọdịnala. Ndị gọọmentị adaberewo na sịga na ihe ndị ọzọ na ...
India: Vapers Ga-emegide Iwu na Septemba 18th ncheta
Mbipụta ndị nchụ nta akụkọ Site na Mmetụta Admin 20-09-10 Hapụ ikwu
Ndị nkwado vaping Indian ga-enwe ngagharị iwe n'otu oge na Fraịde a, Septemba 18, iji gosi otu afọ kemgbe gọọmentị India machibidoro ire ngwaahịa ngwaahịa. A na-ahazi ihe omume a site na Association of Vapers India (AVI). “Anyị na-achịkọta ndị vapu iji mee ka anyị kwuo megide mgbochi mmachi ahụ gove ...
Afọ Iri na Decma Vaping jụrụ 29% na 2020, CDC Survey Na-egosi
Mbipụta ndị nchụ nta akụkọ Site na Mmetụta Admin 20-08-23 Hapụ ikwu
Ihe nchoputa ohuru nke CDC weputara gosiputara 29 pasent nke ntorobịa na-agbapu site na 2019 ruo 2020, na-eweta ya na ọkwa nke ikpeazụ a hụrụ tupu 2018. N'ezie, CDC na FDA ahọrọla ụzọ ọzọ iji gosipụta nsonaazụ. Nsonaazụ ahọpụtara (mana ọ bụghị data ha si) bụ akụkụ nke akụkọ CDC bipụtara na Septemba 9 - otu ụbọchị ahụ bụ ...
Okingụ Sịga Ọzọ, Kpoo Sịga, Epen, E Sịga ọnya Pack, E Liquid Alụlụụ Sịga, Newport E sịga,